“Ike Ya Agwụla M!”
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Ukrainian Zulu
Ụlọ a adịghị mma n’anya n’ihi na e leghaara ya anya. Oké ifufe na oké mmiri ozuzo akpaala ya aka ọjọọ kemgbe ọtụtụ afọ. Ugbu a ike agwụla ya, o yikwara ihe ga-ada taa na echi.
OTÚ ahụ ụlọ ahụ dị bụ otú ọtụtụ alụmdi na nwunye taa dị. Ò nwere mgbe ọ na-adị gị ka alụmdi na nwunye gị ọ̀ na-aga itisa? Ya bụrụ na o nwere, obi amapụla gị n’ihi na o nweghị di na nwunye na-anaghị enwe nsogbu. Baịbụl kwudịrị hoo haa na ndị lụrụ di na nwunye ga-enwe “ọtụtụ nsogbu.”—1 Ndị Kọrịnt 7:28, Baịbụl Nsọ Nhazi Katọlik.
Iji gosi na ihe ahụ Baịbụl kwuru bụ eziokwu, mmadụ atọ ndị na-eme nnyocha kwuru na alụmdi na nwunye bụ “ihe kacha ebutere ụmụ mmadụ nsogbu, ọ bụkwa ihe ọtụtụ ndị na-etinye isi na ya n’oge anyị a.” Ha kwukwara, sị: “Alụmdi na nwunye e ji obi ụtọ bido, nke a tụkwara anya na ọ ga-adịgide otú ahụ, nwere ike ịghọ ihe kacha agbawa obi na ihe kacha akpata mwute ná ndụ.”
Olee otú alụmdi na nwunye nke gị dị? Ná nsogbu ndị a e dere n’okpuru ebe a, ò nwere otu n’ime ha ma ọ bụ karịa nke na-akpa ya aka ọjọọ?
● Ịrụkarị ụka
● Okwu ọjọọ
● Ịgba n’èzí
● Ibu iwe n’obi
Ọ bụrụ na alụmdi na nwunye gị dị ka ụlọ ahụ ike gwụrụla, nke yikwara ka ọ̀ ga-ada taa na echi, gịnị ka i kwesịrị ime? Ọ̀ bụ ịgba alụkwaghịm ga-ebi nsogbu unu?
[Igbe/Foto dị na peeji nke 3]
‘IHE MMADỤ OLE NA OLE NA-EMEBU NKE GHỌRỌ IHE ỌTỤTỤ NDỊ NA-EME’
Ná mba ụfọdụ, ọnụ ọgụgụ ndị na-agba alụkwaghịm bụzi ájá. Ka anyị were mba Amerịka mee ihe atụ. Ọtụtụ afọ gara aga, ọ na-esi ike ịhụ di na nwunye gbara alụkwaghịm. Babra Dafoo Waịthed dere n’akwụkwọ ya nke kwuru banyere ịgba alụkwaghịm na mgbe afọ 1960 gachara, “ọnụ ọgụgụ ndị na-agba alụkwaghịm rịrị elu n’ụdị dị egwu.” Ọ sịrị: “N’ihe na-erughị afọ iri, ọnụ ọgụgụ ndị na-agba alụkwaghịm mụbara okpukpu abụọ, ọ nọgidekwara na-arị elu ruo ihe dị ka afọ 1984. N’oge ahụ, ọ rịrị elu otú ọ na-arịtụbeghị mbụ ná mba ndị mepere emepe, ọ rịtukwaghị arịtu. N’ihi otú ịgba alụkwaghịm si rịa elu ngwa ngwa n’Amerịka n’arịtughị arịtu, n’ime afọ iri atọ, o sizi n’ihe mmadụ ole na ole na-eme ghọọ ihe ọtụtụ ndị na-eme.”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Ike Ya Agwụla M!”